काठमाडौं । जब शरीरमा युरिक एसिड बढ्छ, हाम्रो जोर्नी दुख्न सुरु गर्छ । कतिपय अवस्थामा त हिँडडुल गर्नै पनि गाह्रो हुन्छ । शरीरमा प्युरिन नामक तत्व टुक्रन्छ, तब शरीरमा युरिक एसिडको समस्या देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर बिराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा.लक्ष्मण ठाकुर सँग महिला स्वास्थ्य संवाददाता समृद्धा के .सीले गरेको कुराकानीः
१. सामान्य भाषमा युरिक एसिड भन्नाले के बुझिन्नछ ?
युरिक एसिड भन्नाले हाम्रो शरिरमा हुने एउटा तत्व हो । हामीले खाने खानाहरुमा प्युरिन भन्ने तत्व हुन्छ जुन शरिरको विभिन्न रसायनिक प्रक्रिया हुदै गर्दा युरिक एसिडको उत्पादन हुन्छ । शरीरका कोषिका टुट्ने नयाँ बन्ने प्रकृया चलिरहदाँ त्यसमा पाइने प्युरिन पनि टुट्न थाल्छ । प्युरिन टुक्रनाले शरीरमा रसायनिक असर देखा पर्न थाल्छ, जसले युरिक एसिड देखिन थाल्छ । यो रगतको माध्यमद्धारा मृगौलासम्म पुग्छ । साथै पिसाबको माध्यमद्धारा बाहिर निस्कन्छ ।
२. शरिरमा कसरी युरिकको मात्रा बढ् छ ?
युरिक एसिड शरिरमा बन्ने प्रक्रिया हो । सामान्यता खाने खानेकुराहरुमा प्युरिन भन्ने तत्व हुन्छ त्यसलाई शरिरले विभिन्न प्रयोगमा ल्याउने क्रममा शरिरबाट बाहिर निस्किने बाइप्रोडक्ट हो युरिक एसिड । लक्षणहरु भन्नुपर्दा हाइपरयुरेसिमिया हुन्छ जसलाई युरीक एसिड बढि भएको अवस्था मानिन्छ । त्यस्तै युरिक एसिड दुइटा कारणले गर्दा बढ्छ एउटा प्युरिनको मात्रा बढि भएको खाना खाएपछि र अर्को मृगौला वा दिसाको माध्यमद्धारा युरिक एसिड बाहिर निस्किने बाटोमा समस्या आयो भने युरिक एसिड बढ्ने गर्दछ ।
कुनै औषधिको प्रयोगले पनि युरिक एसिडको मात्रालाई बढाइ दिन्छ भने कहिले काहि ठूलो रोगको लक्षणका रुपमा पनि युरिक एसिडलाई मानिन्छ । जस्तै युरिक एसिड बढेर पनि क्यान्सर रोग पत्ता लागेको छ , क्यान्सरका बिरामीहरुमा युरिक एसिड बढि मात्रामा हुने गर्छ ।
३. युरिक एसिड भए पछि शरीरका कुन कुन अंगलाई बढि असर गर्छ ?
युरिक एसिडले शरीरका दुई वटा अंगलाई असर पुर्याउने गर्छ । जोर्नीहरुमा असर गर्छ जसलाई युरिक एसिडले गर्दा हुने बाथ ९गाउट० भनिन्छ । अर्को भने मृगौलामा गएर ढुगांहरु बनाउने र मृगौलामा विभिन्न खाले समस्याहरु उत्पन्न गराउँछ ।
४.चाँड पर्वमा खाईने खानेकुराले युरिक एसिड बढाउनमा कत्तिको मद्दत गर्छ ?
युरिक एसिड हुनुमा खानपानको निकै ठूलो भुमिका हुन्छ । प्युरिन भएका खानेकुरा सेवन गर्दा युरिक एसिड बढ्न जान्छ । खासगरी रातो मासु, (मटन, सुंगुर) मासुको सेवनले युरिक एसिडको मात्रा बढाउँछ । यो सँगै हामीले खाने दालहरु, गेडागुडीहरु बढि मात्रामा खान्छौ भने त्यसले युरिक एसिड निम्त्याउँछ । अरु खानेकुरा जस्तै पालुगोंको साग,कोल्ड ड्रिक्संले पनि बढाउँछ । रक्सीको सेवनले गाउट बढाउँछ अर्थात युरिक एसिडमा हुने जोर्नीको समस्यालाई रक्सीले बढावा दिन्छ ।
५.युरिक एसिड हुदा कस्ता खाले लक्षण देखिन्छन् ?
युरिक एसिडको सुररुवाती अवस्थामा प्रायः व्यक्तिहरुमा लक्षण देखिदैनन् जाँच गदै जादा युरिक एसिड ७, ८, ९ र कसैको १० पनि पुगेको पाउछौँ । तर युरिक एसिड बडेर हुने बाथले गर्दा जार्नीहरुलाई असर गर्छ र खुट्टाको औलाका जोर्नीहरुलाई पहिला असर पुर्याउँछ । अर्को भनेको युरिक एसिडको जुन क्रिस्टल हुन्छ , त्यो शरिरको विभिन्न भागहरुमा जम्ने र गिर्खा जस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ ।
६. यस बाट जोगिन के कस्ता उपायहरु अपनाउँन सकिन्छ ?
नियमित जाँच गराउनु पर्छ कतिपय युरिक एसिडका बिरामीहरुमा लक्षण देखा पर्दैन त्यसैले पटक पटक मृगौलामा ढुगांहरु देखिने समस्या हुन्छ । सधै जोर्नीको समस्या मात्र हुन्छ भन्ने पनि हुदैन ।
खानपानमा निकै ध्यान दिनु पर्छ कुन खाने कुरा खाने कुन नखाने । जस्तै रातो मासुहरु खान कम गर्ने,दाल, गेडागुडीहरु , पालुगोंको साँगको सेवन अलि कम गर्ने र यदि हामीलाई प्रोटिनको मात्रा चाहिरहेको छ भने कुखुराको मासु र अण्डा खाने अरुको तुलनामा यसले युरिक एसिड कम बढाउने गर्छ। अर्को पानी अलि बढि सेवन गर्ने जस्ले युरिक एसिड जम्न दिदैँन । भिटामिन सि जस्तैः अमला, कागती यी चिजहरुले युरिक एसिढको मात्रा कम गर्छ । कार्बोहाइडेट भएको खाने कुराले पनि युरिक एसिडको मात्रा कम गराउँछ ।
सर्वप्रथम त हामीले हाम्रो जिवनशैली र खानपानलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । धेरै रक्सीको सेवन नगर्ने, मासुहरु खादा कुखुराको मासु खाने, अण्डा खाने र अरु मासुहरुको सेवन कम गर्ने । व्यायामहरु गर्ने साथै बजन कम पनि गर्नु पर्छ ।